Isaorana Andriamanitra satria izany dia nahafahana nijery ny laharam-pahamehana amin’ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka. Olom-boatendry aho teo, hoy izy, ary olom-boafidy ankehitriny. Ny dikan’izay dia nisy fomba fiasa naharesy lahatra ny vahoaka tao matoa aho nametrahany fitokisana. Maro ny tolo-dalàna maika tokony hatolotra eny anivon’ny antenimieram-pirenena mikasika ny distrikan’Ambositra, raha ny nambarany. Eo amin’ny lafiny sosialy, ohatra, dia ny mikasika ny tantsaha mpamokatra no voalohany. Ireo mpamboly sy mpiompy ireo dia maniry hanana hoavy rehefa antitra ka ahoana no ahafahany mahazo famatsiana hanatsarany ny fihariany ? Ny lafiny asa tanana koa, hoy izy, satria voalaza fa renivohitr’izany Ambositra kanefa tena misedra olana io sehatra io, indrindra, eo amin’ny resaka akora. Raha eo amin’ny resaka hazo fotsiny, ohatra, dia anisan’ny akora tsy maintsy hiasana io kanefa etsy an-kilany entanina ny fikajiana ny tontolo iainana. Mila apetraka koa, hoy hatrany ny tenany ny volavolan-dalàna mijery ny tontolo iainana sady mijery ny olombelona.